MDSNG: July 2008
Welcome to MDSNG . It gathers news on Digital Satellite , Astrophysics around the world. Your ideas and news about this field will beagreat help to broaden our knowledge in future.
နာဆာအဖွဲ့က အာကာသလွန်းပျံယာဉ်များလွှတ်တင်ခြင်းကို ရပ...
Mars (အင်္ဂါဂြိုဟ်) (9)
Moon (လ) (9)
Sun (နေ) (4)
ဂျာမနီ သတင်း (1)
သြစတြေးလျ သတင်း (1)
အခြား သိပ္ပံ သတင်း (2)
နိုက်ဂျီးရီးယား သတင်း (1)
အင်္ဂါဂြိုဟ်တွင် စူးစမ်းမှု ပြုနေသည့် Curiosity ဂြိုဟ်ဆင်းယာဉ်မှာ လွန်ခဲ့သည့်နှစ် သန်းထောင်ပေါင်း များစွာက ရှိခဲ့သော် ရှေးခေတ် မြစ်တစ်စ...
သက်ရှိ သတ္တဝါတွေ နေထိုင်လို့ ရမယ့် ပထမဆုံး ကမ္ဘာဂြိုဟ်သစ်ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိ
စကြဝဠာနယ်နိမိတ်အတွင်း သက်ရှိသတ္တဝါတွေ နေထိုင်လို့ ရမယ့် ပထမဆုံ...
မြန်မာ့မိုဘိုင်း ဆက်သွယ်ရေးနှင့် ပတ်သတ်၍ လုပ်ခွင့်ရမည် ဆိုပါက မြန်မာပြည်မှ ဂြိုလ်တုတစ်စင်း လွှတ်တင်နိုင်ရန် Sing Tel မှ အကူအညီ ပေးသွာ...
နေသည် ကျွန်ုပ်တို့ နေအဖွဲ့အစည်း၏ ဗဟိုတွင်တည်ရှိနေသည့် ကြယ်ကြီးတစ်လုံးဖြစ်သည်။ မြန်မာတို့က “သူရိယ” ဟု ပါဋိစကားလုံးမှ ဆင်းသက်လာသည့်အတိုင်း...
ကမ္ဘာ့အမြန်ဆုံး လူစီး လေယာဉ်
လူသားတုိ့သည် ကုန်းနေသတ္တဝါများသာ ဖြစ်ကြသော်လည်း ၎င်းတို့၏ တီထွင်ဉာဏ်၊ ကြိုးပမ်း အားထုတ်မှုတုိ့ကြောင့် ရေပြင် အဏ္ဏဝါကိုသာမက ဝေဟင်တိမ်လွှာကိုပါ အေ...
GPS တွင် ပုသိမ် နှင့် မအူပင် အပါအ၀င် မြို့ကြီး (၂၅)မြို့၏ အသေးစိတ်မြေပုံများထည့်သွင်းနိုင်
ပြည်တွင်း၌ အသုံးပြုနေသည့် ဂြိုဟ်တုဖြင့် တည်နေရာ ရှာဖွေသည့် ဂျီပီအက်စ် (GPS) စနစ်များတွင်...
မောင်းသူမဲ့လေယာဉ် မြန်မာနိုင်ငံတွင် စမ်းသပ်ပျံသန်းနေ
မြန်မာနိုင်ငံတွင် မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များ တည်ဆောက်ပြီး စမ်းသပ်ပျံသန်းနေပြီဖြစ်ကြောင်း သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနမှ ပထမအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှ...
စိန်ပွင့်များတွေ့ရှိမှုနှင့် ကြယ်တံခွန်ဝင်တိုက်ခဲ့ခြင်း အယူအဆ
သေးငယ်သော စိန်ပွင့်လေးများစွာကို တွေ့ရှိခဲ့ရမှုသည် လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း(၁၃၀၀၀)ခန့်က ကမ္ဘာကို ကြယ်တံခွန်တစ်ခု ၀င်တိုက်မိခဲ့သည်ဆိုသော အယူအဆကိ...
မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးဂြိုဟ်တု ၂ဝ၁၅ တွင် လွှတ်တင်ရန် တရုတ်၊ အီးယူတို့နှင့် ဆွေးနွေးနေ
ဆက်သွယ်ရေးဂြိုဟ်တု လွှတ်တင်ရန်အတွက် တရုတ်၊ အီးယူတို့နှင့် စတင် ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်နေပြီဟု မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းမှ သိရသည်။ "လောေ...
နိုင်ငံပိုင် ဆက်သွယ်ရေးဂြိုလ်တု လွှတ်တင်တော့မည် မဟုတ်
နိုင်ငံပိုင် ဆက်သွယ်ရေးဂြိုဟ်တု လွှတ်တင်တော့မည် မဟုတ်ဟု မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းမှ သိရသည်။ အဆိုပါဂြိုဟ်တုကို ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် လွှတ်တင်နိုင်ရ...
You got notification from DocuSign Electronic Service - [image: DocuSign] Review and sign this invoice. SIGN DOCUMENT Dear Recipient, Please review this invoice It is an electronically generated in...
For MIET post graduate students ...
အားလုံးသော MIET မှ Post graduate ကျောင်းသားများအတွက် ... - အားလုံးသော MIET မှ Post graduate ကျောင်းသားများ Predefense အပြီးလုပ်ရမယ့် စာရွက်စာတမ်း များ အဆင်ပြေစေရန်ရည်ရွယ်ပြီးဒီဘလော့လေးကိုဆက်လက်အသက်သွင်းခဲ့တာပါ.. အ...
Windows9အချက်အလက် အသေးစိတ် ထွက်ပေါ်လာ - အနာဂတ်တွင် ထွက်ပေါ်လာဖွယ်ရှိသည့် Windows နှင့်ပတ်သက်သော အသေးစိတ် အချက်အလက်များကို Windows နှင့် ပတ်သက်သည့် ဆက်စပ် သတင်းများ ဖော်ပြပေးသော ရုရှားဝက်ဆိုက် WZ...
နာဆာအဖွဲ့က အာကာသလွန်းပျံယာဉ်များလွှတ်တင်ခြင်းကို ရပ်ဆိုင်းတော့မည်
| Labels: နာဆာသတင်း
အမေရိကန်အမျိုးသားအာကာသသုတေသနအဖွဲ့ချုပ် ( နာဆာ) သည် အာကာသလွန်းပျံယာဉ်များ လွှတ်တင်သည့်အစီအစဉ်များကို အပြီးအပိုင်ရပ်ဆိုင်းရန် ရက်သတ်မှတ်လိုက်ပြီဖြစ်သည်။ အမေရိကန်၏ နောက်ဆုံးအာကာသလွန်းပျံယာဉ်ကို သတ်မှတ်ထားသည့် နောက်ဆုံးရက်မတိုင်မီ လေးလအလို (၂၀၁၀) ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ (၃၀) ရက်နေ့တွင် လွှတ်တင်မည်ဖြစ်ပြီး နောင်တွင်အာကာသလွန်းပျံယာဉ်များလွှတ်တင်ခြင်းကို လုံးဝပြုလုပ်တော့မည်မဟုတ်ပေ။ နာဆာတွင် လျာထားသော လွန်းပျံယာဉ်လွှတ်တင်ရေးအစီအစဉ် (၁၀) ခု မျှကျန်ရှိနေသေးသော်လည်း အမေရိကန်သမ္မတ ဘုရ်ှက (၂၀၁၀) ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၃၀) မှ စ၍ လွန်းပျံယာဉ် ပျံသန်းမှုအားလုံးကို ရပ်ဆိုင်းပစ်ရန် အမိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ အမိန့်အား တနင်္လာနေ့တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ယခုနှစ်တွင် ပျံသန်းမှု (၅) ခု၊ (၂၀၀၉) ခုနှစ်တွင် (၅) ခု၊ (၂၀၁၀) တွင် (၃) ခုတို့ကိုအပြီးသတ် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ကွန်ဂရက်အဖွဲ့ဝင်အချို့ကမူ လွန်းပျံယာဉ်ခရီးစဉ် အနည်းဆုံးနောက်ထပ် (၁) ခုမျှတိုးမြှင့်စေလိုကြပြီး ဒေါ်လာ (၁.၆) ဘီလျံတန်ဖိုးရှိ အယ်လ်ဖာသံလိုက် စပက်ထရိုမီတာအား အာကာသစခန်းသို့ သွားရောက်တပ်ဆင်ရန် ဆန္ဒရှိနေကြသည်။ အဆိုပါ မစ်ရှင်မှာ (၂၀၀၃) ခုနှစ်အတွင်း ကိုလံဘီယာအာကာသလွန်းပျံယာဉ်ပျက်ကျပြီးနောက် ဖျက်သိမ်းခဲ့ရသော မစ်ရှင်ပေါင်း တစ်ဒါဇင်ခန့်တွင် တစ်ခုအပါအ၀င်ဖြစ်သည်။ နာဆာအနေဖြင့် လွန်းပျံယာဉ်များလွှတ်တင်ရေးကို ရပ်ဆိုင်းလိုက်ပြီးနောက် လမျက်နှာပြင် လေ့လာရေး အေရီးဒုံးပျံများနှင့် အိုရီယွန်ယာဉ်များ လွှတ်တင်ရန် အဓိက အာရုံစိုက်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်သည်။